Jeremia 38 - Ny Baiboly
Jeremia toko 38
Ny nanaovana an'i Jeremia tao an-davaka famorian-drano - Ampangain'ny loholona Jeremia, dia alatsaka ao an-davaka - Manalalana hanafaka azy, Abdemeleka - Resak'i Jeremia amin'ny mpanjaka.
1Tamin'izay Safatiasa zanak'i Matana, Gedeliasa zanak'i Fasora, ary Jokaly zanak'i Selemiasa, ary Fasora zanak'i Melkiasa, dia nandre ny teny nolazain'i Jeremia tamin'ny vahoaka rehetra hoe: 2Izao no lazain'ny Tompo: Izay hitoetra amin'ity tanàna ity, ho fatin'ny sabatra sy ny mosary ary ny pesta; fa izay hivoaka hanatona ny Kaldeana kosa, ho velon'aina sy hahazo ny aina ho babony, ka ho velona. 3Izao no lazain'ny Tompo: Hatolotra ny tafiky ny mpanjakan'i Babilona ity tanàna ity, ka ho afany.
4Dia hoy ny lehibe tamin'ny mpanjaka: Aoka hovonoina io lehilahy io! Fa mampiraviravy tànana ny lehilahy mpiady sisa eto an-tanàna mbamin'ny vahoaka rehetra izy, amin'ny fanaovana teny toy izany aminy. Fa tsy mba mitady izay hahasoa ity vahoaka ity io lehilahy io, fa izay hampidi-doza aminy ihany. 5Ka hoy Sedesiasa mpanjaka: Anananareo fahefana izy, fa ny mpanjaka tsy mahefa na inona na inona hisakana anareo. 6Dia noraisin'izy ireo Jeremia, ka nampidininy tao an-davak'i Melkiasa, zanak'andriana, ao an-kianjan'ny fiambenana; mahazaka no nampidinana an'i Jeremia tao an-davaka izay tsy nisy rano, fa fotaka ihany, ka nilentika tanaty fotaka Jeremia.
7Ren'i Abdemeleka etiopiana eonoka tao an-tranon'ny mpanjaka fa hoe tao an-davaka Jeremia, nipetraka teo am-bavahadin'i Benjamina ny mpanjaka tamin'izay; 8dia nivoaka avy tao an-tranon'ny mpanjaka Abdemeleka, ka niteny tamin'ny mpanjaka nanao hoe: 9Ry mpanjaka tompoko ô, ratsy izany nataon'ireo olona ireo tamin'ny nitondrany toy izany an'i Jeremia mpaminany, fa nampidininy ao an-davaka izy; ho faty mosary ao ihany izy, satria tsy misy mofo intsony eto an-tanàna. 10Dia nanome teny an'i Abdemeleka etiopiana ny mpanjaka nanao hoe: Mangalà olona telopolo lahy etoana, hiaraka aminao, ka ampakaro i Jeremia mpaminany avy ao an-davaka dieny mbola tsy maty izy. 11Ary naka ireo olona ireo hiaraka aminy Abdemeleka, dia niditra tao amin'ny tranon'ny mpanjaka ao ambanin'ny trano firaketana. Naka lamba tonta amam-boro-kitsay tao izy, ka nalefany tamin'ny tady izany ho ao amin'i Jeremia ao an-davaka. 12Dia hoy Abdemeleka etiopiana tamin'i Jeremia: Ataovy ao ambany helikao ireny lamba tonta amam-borodamba ireny eo ambanin'ny tady. Nataon'i Jeremia izany. 13Ka nosintonin'izy ireo tamin'ny tady izy, dia nampakariny avy ao an-davaka. Ary Jeremia nitoetra teo an-kianjan'ny fiambenana. 14Tamin'izay dia naniraka haka an'i Jeremia Sedesiasa mpanjaka mba ho ao aminy, ao amin'ny fidirana fahatelo, amin'ny tranon'ny Tompo. Dia hoy ny mpanjaka tamin'i Jeremia: Misy zavatra hanontaniako anao, ka aza anafenana aho. 15Ary hoy Jeremia tamin'i Sedesiasa: MOa tsy hamono ahy tokoa va hianao, raha ilazako izany. Ary raha omeko hevitra hianao, tsy hihaino ahy. 16Dia nianiana mangingina amin'i Jeremia Sedesiasa mpanjaka, nanao hoe: Velona Iaveh izay nanome antsika ity fiainana ity. Tsy hamono anao aho, na hanolotra anao amin'ireo olona mitady ny ainao ireo. 17Ka hoy Jeremia tamin'i Sedesiasa: Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely: Raha mivoaka hanaiky ny lehiben'ny mpanjakan'i Babilona hianao, dia ho velon'aina hianao sy ny mpianakavinao. 18Fa raha tsy mivoaka hanatona ny lehiben'ny mpanjakan'i Babilona kosa hianao: ity tanàna ity hatolotra eo an-tànan'ny Kaldeana, ka hodorany; hianao kosa tsy ho afa-mandositra azy ireo. 19Dia hoy Sedesiasa mpanjaka tamin'i Jeremia: Matahotra an'ireo Jodeana efa nanatona ny Kaldeana aho; dia hatolotry ny olona an'ireo aho ka hataon'ireo fihomehezana. 20Fa hoy ny navalin'i Jeremia: Tsy hanolotra anao ny olona; mba henoy re ny feon'ny Tompo amin'izay ambarako aminao, dia hahita soa amin'izay hianao ary ho voavonjy ny ainao. 21Fa raha mandà tsy hivoaka hianao dia izao no nambaran'ny Tompo tamiko: 22Indro fa ny vehivavy sisa rehetra amin'ny akohonan'ny mpanjakan'i Jodà, hoentina ao amin'ny mpanapaky ny mpanjakan'i Babilona, ka hanao aminao hoe: Sodokan'ny sakaizanao hianao, ka resiny; nihitsoka anaty fotaka ny tongotrao dia nidify kosa izy ireo. 23Ny vady aman-janakao rehetra hoentina ao amin'ny Kaldeana, hianao koa tsy ho afa-mandositra azy ireo, fa ho azon'ny mpanjakan'i Babilona, ary hianao no nandoro ity tanàna ity. 24Dia hoy Sedesiasa tamin'i Jeremia: Aoka tsy hisy olona hahare na inona na inona amin'izao resaka izao, dia tsy ho faty hianao. 25Raha ren'ny mpanapaka fa niresaka taminao aho, ka tonga aminao izy manao hoe: Ambarao anay izay nolazainao tamin'ny mpanjaka sy nolazain'ny mpanjaka taminao; aza misy afenina aminay, dia tsy hamono anao izahay; dia izao no avalio azy: 26Nanatitra ny fitarainako tamin'ny mpanjaka aho, mba tsy haveriny any an-tranon'i Jonatana izay hahafatesako, aho.
27Dia tonga tao amin'i Jeremia tokoa ny mpanapaka rehetra, ka nanontany azy, ka novaliany araka ireo teny rehetra nandidian'ny mpanjaka azy indrindra, ka dia navelany tsy nosahiraniny izy; satria tsy nisy re ny resaka. 28Dia nipetraka tao an-kianja fiambenana Jeremia mandra-pahafaka an'i Jerosalema; ka dia tao ihany izy, nony azo Jerosalema. >